Yakachipa Sheet simbi zvikamu yekutsika fekitori nevatengesi | Ouzhan
Izvo zvakajairika zvemashiti simbi yekugadzirisa ndeiyi: kwakakurudzira simbi, simbi isina simbi, tinplate, chitubu simbi, mhangura uye mhangura chiwanikwa, magnesium chiwanikwa, aruminiyamu chiwanikwa inotonhora yakakungurutswa ndiro, inopisa yakakungurutswa ndiro, kwakakurudzira ndiro, electrolytic ndiro, aruminiyamu ndiro, simbi isina chinhu, ndiro yendarira.
Sheet simbi machina yekutsika maitiro-akagadziriswa chaiwo sheet simbi zvikamu
Kazhinji kutaura, zvekushandisa zvinosanganisira Shear Machine, CNC Kubaya Machine / Laser, Plasma, Waterjet Kucheka Muchina, Kukotama Muchina, uye zvakasiyana-siyana zvekubatsira michina senge: Uncoiling Machine, yekumisikidza muchina, deburring muchina, gwapa rekutemera muchina, nezvimwe. Ouzhan ine izvi zvakakwana zvishandiso uye yakazara seti yekugadzira mitsara. Kukupa iwe nehunyanzvi hwakagadziriswa masevhisi.
Zvakanakira zveOuzhan sheet simbi yekutsika zvikamu
- Iyo yekutsika nzira inogona kuwana workpieces ane akaomarara maumbirwo uye akaomarara kugadzira neimwe nzira, senge dzakaonda goko zvikamu. Iko kwehunyanzvi kurongeka kwekutonhora kutonhora zvikamu kunovimbiswa neforoma, saka iyo yemhando kugadzikana yakanaka uye kuchinjika kwakanaka.
- Yakakwira zvinhu mashandisirwo mwero, kurema uremu, kuomarara kwakanaka uye kwakakwirira simba kweiyo workpiece, uye yakaderera simba rekushandisa mukutsika maitiro, saka maitiro ekudyara muhuwandu hwakawanda akaderera.
- Nyore oparesheni, yakaderera basa kusimba, zviri nyore kuona michina uye kushandisa michina.
-Maumbirwo echimiro anoshandiswa mukutsika maitiro anowanzo kuve akaomarara, uye danho rekuvandudza rakareba uye kudyara kuri pamusoro.
Ouzhan OEM yakagadziriswa sheet simbi yekutsika basa-China Shanghai sheet simbi yekutsika zvikamu zvemugadziri
Ouzhan inogadzira inosanganisa indasitiri nekutengeserana, ichipa imwechete-yekumira kutendeuka uye yekugaya michina yekugadzirisa masevhisi. Zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi, yakakwira-chaiyo sheet simbi yekutsika simbi isina simbi ine yakagadzikana uye yakavimbika mhando inogona kugadziriswa. Idzi michina zvikamu zvinogadzirwa pachishandiswa hwakanakisa mbishi zvigadzirwa, izvo zvinowanikwa kubva kune anozivikanwa-ekururamisa zvikamu zvevatengesi pamusika. Yedu yakasimba uye yehunyanzvi timu yehunyanzvi uye inoshanda manejimendi uye mashandiro sisitimu inogona kuona kugadzirwa kwakakwana kwesheet simbi yekutsika michina zvikamu. Uye zvakare, iyo simbi simbi yekudhinda zvigadzirwa yakapihwa zvakanyatso kutevedzera zvemhando yepamusoro zviyero uye inogona kushandiswa mune akasiyana maindasitiri mafomu. Uye isu tinogona kupa anokwikwidza mutengo masevhisi eshiti simbi yekutsika uye yekutsika zvigadzirwa kune edu akakosha vatengi.
Kunyorera nzvimbo dzesimbi simbi yekutsika zvikamu
1. Sheet simbi yekudhira zvikamu zvemotokari: zvinonyanya kusanganisira zvikamu zvemotokari, zvikamu zvemotokari zvinoshanda, zvikamu zvemotokari lathe, kudzosera mota, nezvimwe.
2. Sheet simbi yekutsikisa zvikamu zvemagetsi: zvinonyanya kusanganisira zvishandiso zvekubatanidza, zvinongedzo, zvikamu zvebrashi, zviteshi zvemagetsi, zvikamu zvakasununguka, nezvimwe.
3. Sheet simbi yekudhinda epamba zvishandiso zvemumba: Zvikurukuru sanganisira hombe midziyo yemumba zvikamu, senge ruvara chubhu elektroni pfuti zvikamu, uye zvidiki zvidiki zvemumba zvikamu, akasiyana masisitimu zvikamu uye zvinoshanda zvikamu.
4. IC yakasanganiswa yedunhu rinotungamira furemu: inonyanya kusanganisira discrete chishandiso chinotungamira furemu uye yakasanganiswa yedunhu lead furemu, nezvimwe.
5. Sheet simbi yekutsika mota musimboti: kunyanya inosanganisira imwechete-chikamu nhevedzano mota musimboti, imwechete-chikamu imba mota musimboti, imwechete-chikamu yakasungwa pole mota musimboti, chigarire magineti DC mota musimboti, maindasitiri mota musimboti, uye epurasitiki stator moyo mira.
6. Sheet simbi yekudhira magetsi esimbi macores: anonyanya kusanganisira E-zvakaumbwa shanduri macores, EI-yakaumbwa-shanduri macores, ini-ndakaumbwa shanduri cores, uye mamwe ma transformer epakati machipisi.
7. Sheet simbi yekupisa kupisa exchanger zvimbi: zvinonyanya kusanganisira yekushisa kupisa exchanger mapini, imba yekupisa exchanger mapezi, uye mota kupisa exchanger mapini.
8. Sheet simbi yekudonha uye zvimwe zvikamu: zvinonyanya kusanganisira zvishandiso zvikamu, IT zvikamu, acoustic uye kamera zvikamu, zvemazuva ano hofisi zvikamu, uye zvezuva nezuva Hardware.
Ndezvipi zvinoshandiswa zve sheet sheet simbi yekutsika zvikamu
1. Mazuva ese uye epamba zvigadzirwa zvekutsika zvikamu: zvinodikanwa zvezuva nezuva zvakaita sehari nemapani, masinki, ketero, nemidziyo yemumba yakadai semuchina wekuwachisa, maekisesaizi emhepo, mafiriji, uye vanobika mupunga;
2. Maindasitiri simbi yekutsika zvikamu: zvishandiso chassis ganda, mota jira simbi uye mainjiniya michina yekutsikisa zvikamu;
3.Kutsikisa Hardware yezvakabatana zvikamu: zvishandiso zvikamu, zvinongedzo, nezvimwe.
4. Special stamping Hardware yeAerospace, ngarava uye ngarava dzegungwa.
Zvakanakira Ouzhan sheet simbi yekutsika sevhisi
-High Kugadzira kugona uye yemakwikwi mutengo.
-Yese yakajeka sheet simbi yekutsika zvikamu zvigadzirwa zviri pasi peyakaomarara mhando yekutarisa.
- OEM expression sevhisi inogona kuve nechokwadi chekuti iwe unogamuchira izvo zvaunoda zvigadzirwa, tsigira DDP, CIF, FOB nedzimwe nzira dzekubhadhara kuve nechokwadi chekuti vatengi vanogona kugamuchira zvinhu zvakachengeteka.
- Zvinoenderana nemadhirowa kana sampuli kugadzira chaiyo sheet simbi yekutsika zvikamu.
Pashure: Sheet simbi zvikamu polishing zvikamu
Zvadaro: Tsika jira simbi yekutsika zvikamu
Customized zvemaziso nendarira akatendeuka zvikamu proce ...
Yakakwenenzverwa aluminium alloy musu uye hwindo maitiro ...
6016 aruminiyamu chiwanikwa kupisa kurapwa CNC machinin ...